Ra’iisul Wasaaraha oo qado sharaf u sameeyay ciyaartoydii 11-jiradii wacdaraha ka dhigay Tartankii Jeem Cup | Gaaloos.com
Home » News » Ra’iisul Wasaaraha oo qado sharaf u sameeyay ciyaartoydii 11-jiradii wacdaraha ka dhigay Tartankii Jeem Cup
Ra’iisul Wasaaraha oo qado sharaf u sameeyay ciyaartoydii 11-jiradii wacdaraha ka dhigay Tartankii Jeem Cup
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa maanta Qado sharaf u sameeyey Ciyaartoydii 11-jirada oo ku matalayay Qaranka Soomaaliya Tartankii Jeem Cup ee lagu qabtay dalka Qadar. Waxana uu Ra’iisul Wasaaruhu boggaadiyey sida ay uga soo dhex muuqdeen ciyaaraha iyo guulihii ay gaareen mudadii ay ciyaaruhu socdeen.
“Maanta farxad ayay ii tahay in aan qado u sameeyo dhalinyaradii kor u qaaday magaca Soomaaliyeed, waxaad tihiin geesiyaal guul u soo hooyay Soomaaliya. Waxana idiin haynaa qadarin”ayuu yiri R/Wasaare Cumar oo intaas raaciyey in kulamada soo socda uu rajeynayo guul ka ballaaran tan in ay gaari doonaan.
“Waa fursad fiican oo mustaqbal u noqon karta, jiilkan yar yare e aad arkeysaan, runtii Xukuumaddu way bogaadineysaa tallaabooyinka lagu dhiiri gelinayo da’yarta isboorti, oo aan dhihi karo inay Soomaaliya u tahay mustaqbal fiican”ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyey R/Wasaare Cumar.
Title: Ra’iisul Wasaaraha oo qado sharaf u sameeyay ciyaartoydii 11-jiradii wacdaraha ka dhigay Tartankii Jeem Cup
Posted by galmada Net, Published at 8:47 PM and have 0 comments